Retreats Yoga Top In Europe Oo Helitaanka Waxaa By tareenka | Save A tareenka
Book A Tareen Ticket NOW
Home > Yoga in Europe > Retreats Yoga Top In Europe Oo Helitaanka Waxaa By tareenka
by Liam Mallari 04/04/2019
safarka tareenka, safarka tareenka Austria, safarka tareenka Britain, safarka tareenka France, safarka tareenka Germany, safarka tareenka Italy, safarka Europe, Yoga in Europe
Haddii aad raadineyso weeyna in ay ka baxsadaan si weeynaa top yoga Yurub aad fasax soo socda, aad tahay in nasiib. Qaar ka mid ah dalalka ugu quruxda badan European badan si ay u bixiyaan marka ay timaado yoga iyo nasashada. Inkastoo India waxaa loo arkaa inay meesha ugu yoga ee dunida, Yurub ayaa runtii qaaday dhaqanka iyo ayaa waxaa isku duubay sida iyaga u gaar ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah weeynaa yoga ugu sareysa Europe, sidoo kale jidadka waxaa helitaanka tareen:
Retreats Yoga ee Italy
Beautiful, muuqaal dejinaaya hubaal koryeelaa kartaa dhaqanka yoga aad - in aan ku xuso hawo nadiif ah iyo qorax. Haddii taasi waxa weeye waxa aad raadineyso weeyna, markaas Italy meesha kuu. Dhammaan meelaha u gurasho yoga qurux badan uu ka soo xusho, waxaan raalli buu kuwa Tuscany. Waxaad qaadan kartaa a tareen kortaan muuqaal dabiici ah iyada oo loo marayo gobolka iyo soo afjaro safarka on dib u gurasho yoga ee Chianti a. qorax ku raaxaysan, khamriga iyo sii joogi u xusuusataa iyo hadiyad - waxa uu noqon karaa fiican?
Perugia in Tareenadu Castellina Chianti
Retreats Yoga ee France
Waayo, kuwa idinka mid ah oo jacayl la buuraha, Alps Faransiis ah ayaa la fursad ma seegi kartid. Kale oo aan ahayn yoga joogto ah, in French Alps, yoga Jeedsado aad samayn kartid tug, yoga, aqado biyo cad, iyo xataa paragliding. Annecy waa magaalo weyn oo ay ku booqan ujeedadaas, oo aad ka gaari karin tareen ka Paris. Waa hubaal ah tuurnimo ku haboon oo loogu talagalay dadka jecel hab nololeed firfircoon.
Paris si ay Tareenadu Annecy
Geneva in Tareenadu Annecy
UK waxay leedahay badan oo dabiici ah, breathtaking meelaha u Dumayn, sida Glastonbury, Devon, Kent, Scotland, iyo kuwa kale. Si kastaba ha ahaatee, aan weli door bidaan London waayo, ruuxa iyo jawi u gaar ah. Haddii aad raadineyso weeyna u gurasho ka badan magaalooyinka yoga waayo-aragnimo, ka dibna London ay yihiin doorasho wanaagsan,. Tirada fursadaha ka dhigi doonaa wareejin madaxa - waxaa jira wax yoga dhadhan kasta. Waxaad si fudud u gaadhi karto magaalada tareen ka badan magaalooyinka waaweyn ee Europe, si ay bonus kale.
Germany qaadataa fayoqabka dhab ah oo inta badan isku daraa dhaqanka yoga ah oo waayo-aragnimo ah HBS buuxa. Waa fiican ee fasaxa marka aad rabto in aad nasasiino iyo talaabo ka fog nolosha mashquulsan. Germany xitaa waxay bixisaa weeynaa gebi ahaanba iska aamusa, badan ee dhaqanka fikirka mindfulness iyo qaar ka mid ah daawaynta HBS weyn. Jidaynayey aamusnaan iyo nabdoonaanta ee dabiiciga ah si ay iska maydh stress waa la karinayo wanaagsan nasashada. Haddii ay tani u muuqataa sidii wax yaabo in aad u baahan tahay, aad u qabsan kartaa tareen si ay Bavarian ka Alps.
Austria jecel yahay weeynaa ay yoga qaboobaha, taas oo ka dhigaysa waxaa a caga kaamil ah inta lagu guda jiro xilliga sanadkan. Waa maxay sababta aan u la kulmaan xilli in dhammaan sharafteedii? Xataa haddii aad neceb qaboobaha, aad ku xidhxidhay si loo qadariyo sida weeynaa yoga ee Austria ka dhigi Farax. Waxay qabow qaadan cimilada iyo idiinku beddelin hab caafimaadka-kor u qaadida a, daraysa Hababka kala duwan ee yoga, tug iyo nabad hurdo si kor loogu qaado difaaca. Salzburg waa mid ka mid ah magaalooyinka dalka Austria halkaas oo aad this la kulmi karaan, oo aad ka gaari karin tareen.
Prague in Tareenadu Salzburg
Diyaar ma u tahay in aad riyo ku cararaan yoga in mid ka mid ah meelaha ugu sareeya Europe? Jartaan tikidhka tareenka aad mid ka mid ah weeynaa yoga ugu sareysa Europe hore ee heshiis fiican kuraasta!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/yoga-retreats-europe-train/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / de ama / ru iyo luuqado badan.
#meditation #peacefulness #relaxation #Yoga europetravel tareen safarka
safarka tareenka Norway, safarka Europe
safarka tareenka, Belgium safarka tareenka, safarka tareenka Denmark, safarka tareenka France, safarka tareenka Germany, safarka tareenka Italy, safarka tareenka Scotland, safarka tareenka Spain, safarka tareen UK, safarka Europe
safarka tareenka Germany, safarka Europe